Hottest promotion for MPT Data Pack!!
Title : MPT Data Pack များအတွက် အမိုက်စားပရိုမိုးရှင်း !
MPT Money Customer များအတွက် MPT Money အက်ပလီကေးရှင်း နဲ့ MPT Data Pack တွေဝယ်တိုင်း ၁၀%တောင် ပြန်အမ်းငွေ ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ကန့်သတ်ချက်အနေဖြင့် MPT Data Pack များ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် ၀ယ်ယူမှုပမာဏ၂၅,၀၀၀ ကျပ်အထိကို ၁၀% e-money ပရိုမိုးရှင်းရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၂၅,၀၀၀ ကျော်သွားပါက ကျော်သွားသောပမာဏ မှစပြီး ၅% ကို e-money အဖြစ်အကောင့်ထဲ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခွင့်ရေးကောင်းကိုလက်မလွတ်ဖို့ အခုပဲအောက်ပါလင့်ခ်များမှာ ဒေါင်းလုဒ်ရယူ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ဒေတာပက်ခ်များ၀ယ်ယူလိုက်ရအောင်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလ - ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့အထိ
Android အတွက် http://bit.ly/MPTMoneyAndroid
iOS အတွက် http://bit.ly/MPTMoney_iOS